काठमाडौं उपत्यकाका कुन-कुन क्षेत्र सिल गरियो ? हेर्नुहाेस सूची सहित – Jagaran Nepal
काठमाडौं उपत्यकाका कुन-कुन क्षेत्र सिल गरियो ? हेर्नुहाेस सूची सहित
काठमाडौं । सबैभन्दा धेरै जनघनत्व रहेको काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्मणका घटनामा निरन्तर वृद्धि आइरहेको छ। सवारी चालक देखी अस्पतालमा बिरामीको सेवामा उपचाररत चिकित्सकहरुमा समेत संक्रमणका घटना देखिएका छन्।
संक्रमणले भयावह रुप लिँदै गएपछि उपत्यकाका तिनवटै स्थानीय सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्। विज्ञहरुले महामारी रोक्न सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन तथा परीक्षणको दायरा बढाउँन आग्रह गर्दै आइरहेका छन।
संक्रमणका घटना समुदाय स्तरमै भेटिन थालिएपछि उपत्यकाका केही क्षेत्रमा सिल गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार हाल उपत्यकामा २५ स्थानमा सिल गरिएको छ। जसमध्ये काठमाडौं महानगर भित्रका मात्रै ७ वटा स्थान छन्।
– जि.भक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिका-४ हिञ्चोक दधिकोट स्थित घर कम्पाउण्ड एरिया
-भक्तपुर सुर्यविनायक न.पा-२ गोदावरी पुल स्थित घर कम्पाउण्ड
-भक्तपुर मध्यपुर थिमी न.पा-५ राधेराधे स्थित घर कम्पाउण्ड
-भक्तपुर मठि न.पा-५ परानो गिठी संक्रमित बस्दै आइरहेको घर तथा कम्पाउण्ड
-भक्तपुर चाँ न.पा -७ खरिपाटी संक्रमित बस्दै आइरहेका घर तथा कम्पाउण्ड
-भक्तपुर सुर्यविनायक नागरपालिका वडा-१ सिरुटार स्थित संक्रमण पुष्टि भएकाको घर कम्पाउण्ड
-भक्तपुर मठि न.पा ०७ धुन्चेपाखामा रहेको-६ जनाको परिवार बस्ने घर र कम्पाउण्ड
-भक्तपुर गिठी नगरपालिका वडा-१ लोकन्थली स्थित संक्रमित भेटिएको घर तथा कम्पाउण्ड
-भक्तपुर व्यापसी न.पा-२ स्थित घर कम्पाउड
-भक्तपुर चाँनपा-७ स्थित घर र कम्पाउण्ड
-भकत्पुर सुनपा-४ दधिकोट स्थित रहेको घर र कम्पाउण्ड
-भक्तपुर मठिनपा-३ कौशलटार
-भक्तपुर सुर्यविनायक न.पा-८ सिपाडोल
-भक्तपुर मध्यपुर ठिमी न.पा-१ लोकन्थली
-भक्तपुर मठिमि न.पा-१ कौशलटार
-भक्तपुर सुर्यविनायक नपा-५ सल्लाघारी स्थित घर कम्पाउण्ड
-का.जि.का.म.न.पा-१४ कुलेश्वर, कालिमाटी पहेलो पुल देखी कुलेश्वर गणेश मन्दिर सम्म
-का.जि.शंखरापुर न.पा वडा-९ लाकिला पिपलबोट देखी कागेश्वरी मनहरा नपा वडा नं -१ गलफेदी बजारको सीमाना सम्मको एरिया
-का.जि.च.ना.पा-१२ बलम्बु स्थित ४ तल घर सिल
-का.जि.का.म.नपा वडा-३२ कोटेश्वर एरियामा सेतोओपी मार्ग, पानीपुरी चोक ,महादेवस्थान, मदनभण्डारी पार्क, अष्टाङग आर्युवेदिकसम्म
-का.जि का.म.पा न.पा-५ हाँडीगाउँ गहानपोखरी कोटाटोल
-त्रि.वि.वि शिक्षण अपताल महाराजगन्ज